ဘီပုိး စီပုိး အသည္းသမားမ်ား သခြတ္ကုိေသာက္ ေရာဂါေပ်ာက္...! - Thadin
HomeHEALTHYဘီပုိး စီပုိး အသည္းသမားမ်ား သခြတ္ကုိေသာက္ ေရာဂါေပ်ာက္…!
ဘီပုိး စီပုိး အသည္းသမားမ်ား သခြတ္ကုိေသာက္ ေရာဂါေပ်ာက္…!
February 12, 2019 Kay Kay HEALTHY Comments Off on ဘီပုိး စီပုိး အသည္းသမားမ်ား သခြတ္ကုိေသာက္ ေရာဂါေပ်ာက္…!
ပထမဦးစြာ ေဆးက်ုဳိရန္အတြက္ ေၿမအုိးအသစ္တလုံးကုိ ရယူပါ ေၿမအုိးထဲ့တြင္ သခြတ္ပြင့္ ၊ အရြက္ ႏွင့္ အေခါက္တုိ ့ကုိ ေရနဲ့သုံးခြက္တခြက္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ ၿပဳတ္ၿပီး ေသာက္သုံးေပးပါ တေန ့ကုိ သုံးႀကိမ္( သုိ့) ႏွစ္ႀကိမ္ေလာက္ လုပ္ေဆာင္ေသာက္သုံးေပးပါ ။
အေခါက္တစ္မ်ဳိးတည္းကုိလည္း ႀကဳိခ်က္ေသာက္သုံးႏုိင္ပါသည္ ။ အရြက္အေၿခာက္ႏွင့္ အပြင့္အေၿခာက္ကိုေတာ့ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ အတုိင္း ေသာက္သုံးလည္း ရပါသည္ ။
အရြက္ေၿခာက္နဲ့အပြင့္ေၿခာက္အနည္းငယ္ကုိလည္းလက္ေၿခာက္ပုံစံၿပဳလုပ္ၿပီးေတာ့လည္း ေဆးအၿဖစ္ ေသာက္သုံးနုိင္ပါေသးသည္ ၊ လက္ဖက္ေၿခာက္ခပ္သည့္ ပုံစံလုိ လက္ဖက္ေၿခာက္အစား သခြတ္အရြက္ေၿခာက္ႏွင့္ အပြင့္ေၿခာက္ အနည္းငယ္ထည့္ခပ္ ေရေႏြးႀကမ္း ေသာက္သုံးသလုိ ့လည္း လုပ္ေသာက္ၿခင္းၿဖင့္ အသည္းေရာဂါအတြက္ ႀကဳိတင္ကာကြယ္ၿခင္း အက်ဳိးေက်းဇူးရရွိပါသည္ ။
ေဆးနည္းဒါန ​ေ၀မ်ွရ​ေသာ ကုသိုလ္အက်ိဳးေၾကာင့္ မိမိေအးခ်မ္းသာယာသလို ေလာကသားအားလံုး ေအးခ်မ္းသာယာပါေစ ….အသိမွန္အျမင္မွန္မ်ားျဖင့္ က်န္ရွိေသာဘဝကိုလွပစြာျဖတ္သန္းႏိုင္ၾကပါေစ….။
သခွတ်အစွမ်းကြောင့် စီပိုး အသည်းသမားသည် ပိုးကောင်ရေ သိန်းချိီရာမှ ဆယ်ဂဏန်းမျှသာကျန်ရှီတော့ပြီး ရောဂါမှာသိသိသာသာ ပျောက်ကင်းသွား သလောက်ဖြစ်သွားသောကြောင့် အသည်းအထူးကု ဒေါက်တာ ခင်မောင်ဝင်း ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်အံ့အားသင့်လို့သခွတ်သောက်သော လူနာကို မှတ်တမ်းအပြု ့ခံလိုက်ရသော မြန်မာတို ့၏ သခွတ်ပင် သာဖြစ်ပါသည် ။
သခွတ်ပင်၏ အပွင့် အရွက် အခေါက် တု ိ့ကို ယူပါ။ အပွင့်နှင့်အရွက်ကိုတော့ နေအနည်းရသော နေရာမှာ အခြောက်ခံလိုက်ပါ (လက်ဖက်ခြောက််လို ့လည်း သောက်သုံးလို ့ရနိုင်စေရန် အတွက် ) အခေါက်ကိုတော့ ရေဆေးပြီး ကြာရှည်သိမ်းထားလို ့ရအောင် နေဖန် ့ဖန် ့ပြပြီး အခေါက်ကို သုံးစွဲ ရပါမည်။
ပထမဦးစွာ ဆေးကျုုိရန်အတွက် မြေအိုးအသစ်တလုံးကို ရယူပါ မြေအိုးထဲ့တွင် သခွတ်ပွင့် ၊ အရွက် နှင့် အခေါက်တို ့ကို ရေနဲ့သုံးခွက်တခွက်ကျော်ကျော်လောက် ပြုတ်ပြီး သောက်သုံးပေးပါ တနေ ့ကို သုံးကြိမ်( သို့) နှစ်ကြိမ်လောက် လုပ်ဆောင်သောက်သုံးပေးပါ ။
အခေါက်တစ်မျိုးတည်းကိုလည်း ကြိုချက်သောက်သုံးနိုင်ပါသည် ။ အရွက်အခြောက်နှင့် အပွင့်အခြောက်ကိုတော့ အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း သောက်သုံးလည်း ရပါသည် ။
အရွက်ခြောက်နဲ့အပွင့်ခြောက်အနည်းငယ်ကိုလည်းလက်ခြောက်ပုံစံပြုလုပ်ပြီးတော့လည်း ဆေးအဖြစ် သောက်သုံးနိုင်ပါသေးသည် ၊ လက်ဖက်ခြောက်ခပ်သည့် ပုံစံလို လက်ဖက်ခြောက်အစား သခွတ်အရွက်ခြောက်နှင့် အပွင့်ခြောက် အနည်းငယ်ထည့်ခပ် ရေနွေးကြမ်း သောက်သုံးသလို ့လည်း လုပ်သောက်ခြင်းဖြင့် အသည်းရောဂါအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း အကျိုးကျေးဇူးရရှိပါသည် ။
သခွတ်ဆေးရည် သည် အသည်းနဲ ့ပတ်သက်သော အသည်းအဆီဖုံးခြင်းနှင့် ဘီပိုး စီပိုး အသည်းရောဂါ ဖြစ်နေသူများ အတွက် အကောင်းဆုံး ဆေးစွမ်းထက်မြတ်ပေးစွမ်းနိုင်သော သခွတ်ပင်၏ ကျေးဇူးများသာ ဖြစ်ပါတော့သည် ။
ဆေးနည်းဒါန ​ဝေမျှရ​သော ကုသိုလ်အကျိုးကြောင့် မိမိအေးချမ်းသာယာသလို လောကသားအားလုံး အေးချမ်းသာယာပါစေ ….အသိမှန်အမြင်မှန်များဖြင့် ကျန်ရှိသောဘဝကိုလှပစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ….။
ကြၽန္​မ သူ႔အတြက္​ အစစ အရာရာ စိတ္​ပူ​ေပးခဲ့တယ္​ ဒါ​ေပမယ္​့ . . . သူ႔အတြက္​ အ​ေရးမပါခဲ့ဘူး
ဆႏၵျပသူမ်ားအား ရာဘာက်ည္ဆံျဖင့္ ပစ္ခတ္ျဖိဳခြဲမႈ ရုပ္သံ ထြက္ေပၚ
This Month : 34608
This Year : 176065
Total Users : 535089
Total views : 2419517